Spam, Scam uye Ngozi. Unovenga spam here? Ndinovenga spam. Ndinonyanya kuvenga spam - kutaura kwakatendeka kweSalt expert
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt Digital Services, anobvuma kuti haadi kuparadzirwa kweEndaneti uye spam. Kana munhu upi zvake achindipopotera achishandisa tsamba dzisina kumboreswa e-mail dzinotengesa mukana wekudzidzisa RA, ndichashandisa simba rekutauraRA kuti aise pachena.
Pamazuva ekutanga a GRAPA, ndakagamuchira mumwe wavo spam emails. Ndinonzwisisa kuti vanhu vakawanda vachiri kuwana spam emails kubva ku GRAPA. Ndinokoshesa kuti vakamira kuparadzanisa zvinyorwa zvangu email. Ndinotenda kuti vakabvisa email yangu kero kubva pavanonyora mazita avo - debian openvz control panel. Zvisinei, ini iye zvino ndinogamuchira mharidzo kubva kune spammers itsva. Vanopikira kugovana ruzivo pamusoro pekudzivirira kwenhema, kuvimbiswa kwemari, uye kutaridzika kwematambudziko.
Sangano re spam rinozivikanwa seIVyN Technologies. Zita rekambani rinoshushikana nokuti harisi giramatically rakarurama. Kushandura mabhuku maduku uye makuru mune rimwe shoko hakugamuchirwi mumutauro weChirungu. Zvakakosha kushandisa shanduro yekunyora yakakodzera kana uchitaura muchiChirungu. iVyN Technologies inopa rubatsiro rwekudzidzisa pamubhadharo. Izvo zviyero zvidzidzo zvidzidzo zvishoma zvinodhura GBP6500 / USD10500. Purogiramu yekutanga yekudzidzira inodhura GBP800 / USD13000. Mukutengeserana kwemari, iyi "mutengo wemutengo" inozivikanwa se "chump mutengo." Tifungidzira kuti kambani inopa huwandu hunokonzerwa ne80% kune vatengi vakatendeka. Munhu acharamba ari nyanzvi yekubhadhara mari yakawanda yekambani isina kuchengetwa kwemakore akawanda.
Zvinokurudzirwa munhu anoda kudzidza kutenga bhuku pane kushandisa shandisi dzePomputer PowerStudio. Bhuku rakanaka rinobhadhara GBP50 / USD80..Mari yekubhadhara yakakonzerwa neIVyN's standard program yekudzidzisa yakakwana kutenga mabhii 130 ebhuku racho. 50 quid (80 bucks) yakakwana kutenga bhuku chaiyo nemitauro yakadhindwa iyo inogona kuverengwa kana kombiyuta isiridzirwa. Vanhu havafaniri kupedza GBP6500 / USD10500 vachitarisa Simidi yePowerPoint yakakopiwa uye yakatorwa kubva kuPatPoint mharidzo yakashandiswa mumusangano unotyisa wakaitika makore gumi akapfuura.
Kutapisa uye kukanganisa hakufaniri kuregererwa nokuti zvinosanganisira kushamwaridzana kusina kukodzera kwebhokisi riri mubhokisi uye kukanganisa kushandiswa kwevashandi. Spam inowedzera mabasa ehutachiona nokuti inokurudzira vashandi kutenga mabhizimusi kana zvigadzirwa zvavasingadi pane zvakanyanya mari. Nhare yakachengeteka inowanikwa apo vatungamiri nevashandisi vanokwanisa kusimudza spam uye zvinyorwa zvekutsvaga. Kutsvaga cyber kuchengetedzwa kwekudzidziswa kubva kune kambani inotumira spam emails yakafanana nekutenga anti-virus software kubva kune kambani inobata kombiyuta ine malware. Nyaya yakagadzikana haina kubudirira. Chikamu 1 isumo yeRA. Iyi ruzivo inogona kuwanikwa pachena kubva kumabhuku uye zvinyorwa.
Chikamu 2 ndechekudzivirira uye kutonga. Mashoko aya haafaniri kuratidzira zvakasiyana-siyana mitambo. Chikamu 3 iSimbo. Dzidzo yacho ine kopi-yakashandurwa shanduro yeR RA yokukura muenzaniso. Chikamu 4 RA Ra Tool Selection. Makambani mazhinji emakambani ekuterevhizheni ane radhi RA. Vashandi vekombiyuta vanogonawo kuwana RA rairi nyore kana kuti mari inodhura kubva kumakambani eInternet seCVidya.
Inyanzvi yemagetsi ejw.org inobvumira vashandi kuti vasvike mukana weR RA pachena. Chikoro chacho chine chikamu chekunetseka kwekunze kwenhema. Kune hukama hwakasimba pakati pekubiridzira kwemukati uye kukurudzira mudzidzi wepakombiyuta kuti atenge mari inodhura iri paIndaneti. Chikamu chekupedzisira chechikoro ndechokuti kune ngozi dzinofadza. Dzidzo inoratidza zvirwere zvinokonzerwa nekuchengeteka kwekuchengetedzwa kwenyika, zvekuchengetedzwa kwevanhu, uye e-commerce. Ndinovenga muchengeti wepaIndaneti uye spam. Vashandi vekombiyuta havafaniri kukomborera spammers. Vanofanira kuregererwa. Maitiro avo uye spam emails vanofanira kuudzwa kune network network security providers.